ပထမဆုံး ကျတော် ရေးခဲ့ဖူးတဲ့ Blog မှာ မြန်မာလို ရေးရတာ အဆင် ပြေအောင်... ကို အရင်ဖတ်ပြီး စမ်းကြည့်ပါ... post အသစ်ရေးဖို့ အတွက် compose လုပ်တဲ့နေရာရောက်သွားရင် “ဒီစာကို Select ပေးပြီးရေးပါ...” လို့မြင်ရရင်၊ ဖတ်လို့ရရင် လုပ်ထားတာမှန်တယ်... စာကို select ပေးပြီး ကိုယ်ရေးချင်တာရေးပေတော့... select ပေးထားတဲ့အချိန် delete မလုပ်ပါနဲ့၊ backspace မနှိပ်ပါနဲ့... ဒါက post တွေကိုပဲ မြန်မာလို မြင်ရအောင် လုပ်ပေးတာပါ... title တွေ၊ heading တွေ၊ ဘာညာတွေကို မြန်မာလို မြင်ရအောင် မလုပ်ပေးပါဘူး... ဒါနဲ့ အဆင်မပြေဘူးဆိုရင် ကိုယ်ရေးချင်တဲ့စာတွေကို notepad (သို့မဟုတ်) Word ထဲမှာ ရိုက် copy ကူးပြီး post အသစ်တင်တဲ့ထဲမှာ လာပြီး paste လုပ်...
blog စာမျက်နှာ တစ်ခုလုံးကို Zawgyi-One font နဲ့ ပေါ်စေချင်တယ် ဆိုရင် How to Assign Zawgyi-One font in Blog [NLS]ကို လေ့လာပါ...
ဒီအပေါ် ၂-ခုကို အရင်လေ့လာပါ... အဲဒီ ၂-ခုရရင် ဘလော့စာမျက်နှာ တစ်ခုလုံး မြန်မာလို အဆင်ပြေပြေနဲ့ ပေါ်ပါလိမ့်မယ်... မရသေးဘူးဆိုရင်လည်း ပြင်ကြည့်ပါ... အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားကြည့်ပါ... ခေါင်းတွေ သေရည် သေရက် မသောက်ရဘဲ ခေါင်းတွေ ချာချာလည်မူးနောက်လိမ့်မည်... ကျတော်လည်း template ပြင်တိုင်း ခေါင်းတွေ မူးနေတုန်းပါ... အခုနောက်ဆုံး ပြင်ထားတဲ့ လက်ရှိ template လေးတောင် အဟောင်းကနေ အနည်းငယ် ပြောင်းလဲမှုလုပ်ထားသော်လည်း ခေါင်းတွေမူးပြီး ၂-ရက်ခန့် အချိန်ပေးလိုက်ကြောင်းပါ...
ညီလင်းဆက် စုပေါင်းထားပေးတဲ့ Making Myanmar Blog ကို လေ့လာပါ...
ကိုရန်အောင်ရဲ့ ဘလော့မှာ My HelpDesk ဆိုပြီး ရှိပါတယ်... သွားရောက်လေ့လာပါ...
Saturngod ရေးသားတဲ့ မြန်မာဘလော့ဂ် လုပ်နည်း လက်စွဲစာအုပ်ကို ဒီနေရာကနေ download ယူပြီး ဖတ်နိုင်ပါတယ်...
My Label: Myanmar Blogger, how to
how to Myanmar Blogger
all i need said…
ဦးဦးမောင်လှရေ . . . . . အကိုက အီးအိုတီ လုပ်ရာမှာ ဆရာတစ်ပါးပဲ မြန်မာ ဘလော့တိုင်း အီးအိုတီ မလုပ်တတ်ဘူး တစ်ချို. အီးအိုတီ လုပ်နည်းတင်ထားတဲ့ ဘလော့တွေတောင် ဇော်ဂျီမရှိရင်ကြည့်လို့မရဘူး အကိုရဲ source ကိုအကြီမ်ကြီမ်ကြည့်တာတောင် အဖြေမထွက်ဘူး အကိုရယ်ဦးရန်အောင် ဇော်ဂျီမရှိလဲမြင်တယ် ကျွန်တော်တော့ခေါင်းချောက်နေပြီအကို ဦးရန်အောင် နဲ့ အကိုနည်း ကောသုံးပြီးပြီ မရဘူး download sofeware နဲ့ စမ်းပြီးပြီ ဘလော့အပေါ်မှာ templete ထဲကစာတွေထွက်လာတယ် ဘလော့အသစ် ဖွင့်ပြီး စမ်းတော့လည်းဒီအတိုင်းပဲ အကို 100%မြန်မာဘလော့ကာဖြစ်ဖို့ကတယ်မလွယ်ဘူး လာလည်ပါအုံးအကို http://waiair.blogspot.com
good တယ် ကိုမောင်လှရေ
ကိုမောင်လှရေ ကျွန်တော် ကိုမောင်လှရဲ့လမ်းညွှန်မှုအတိုင်း ဘလော့တစ်ခုလုပ်ထားပါတယ်။ နောက်ပြီး ဟိုရှာဒီရှာပေါ့။ ကျွန်တော့ဘလော့မှာ လိုတာလေးတွေရှိနေပါသေးတယ်။ ကျွန်တော့ရဲ့ ဘလော့လေးကိုလည်း ၀င်ရောက် လေ့လာပေးပါအုံးခင်ဗျား။ လိုတာလေးတွေကိုလဲ အကြံပြုပေးစေလိုပါတယ်။ ကျွန်တော့်ဘလော့လိပ်စာကတော့ http://kyarlay.blogspot.com ပါ။
ကိုမောင်လှ၏ တပည့်ပရိတ်သတ် . . .
Red scorpion girl said…
ကျွန်မက အခုမှ ဘလော့ စလုပ်တာဆိုတော့ သိပ်မသိသေးဘူး။ zawgyi font assign လုပ်ဖို့ နေရာရာမတွေ့ ဘူးဖြစ်နေတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲ
ဒကာလေးမောင်လှရေ eot လုပ်လို့မရလို့ စိတ်ညစ်နေတာ ကူညီပါဦး
စက်ထဲမျာ ဇော်ဂျီကီးဘုတ်လဲ ရှိပီးသား font လဲ ရှိပီးသား အဲဒါ လုပ်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျာ
ကျွန်တော်က အခုမှ blog ရေးမလို့ပါ....
ကျွန်တော့် blog မှာ အကန့်လေးတွေခွဲချင်လို့ပါ...
အခုမေးချင်တာကမနေ့ကကျွန်တော် Website နဲ့ Hosting ၀ယ်လိုက်တယ်။ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်သူငယ်ချင်းတွေစုပြီးလူတွေကိုတစ်ခုခု (တစ်ခုခုပေါ့ဗျာ)အကျိုးပြုနိုင်မယ့် ဟာလေးလုပ်ချင်လို့ပါ။ဒါပေမယ့်ဘယ်ကစလုပ်ရမှန်းမသိဖြစ်နေတယ်ခင်ဗျ။အဲဒါအစ်ကိုရဲ့အကြံဥာဏ်လေတောင်းချင်လို့ပါ
ဒီနေမှာကော်မန့်ပေးတာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဆိုဒ်မှာက Wordpress ပဲပါတော့ ဘလောက်ထဲကိုမြန်မာလိုပေါ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလိုက်ရှာရင်းနဲ့ပါ။
အမှားပါရင်ခွင့်လွှတ်ပါခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်ကစာသိပ်မရေးတတ်တော့ ကိုယ်လိုချင်တာကိုပဲပြောတတ်ပါတယ်။
အော် စကားမစပ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ Personal မေးက [email protected] ပါ။အစ်ကို့အကြံဥာဏ်လေးတွေနဲ့
အစ်ကိုရေကျွန်တော်ကအခုမှblog စရေးမှာမိုလို့blog အကြောင်းကိုတစ်ခုမှ
ဖြစ်နိင်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်ပိုင် blog တစ်ခုလုပ်ဖိုဘာတွေစလုပ်ရမလဲ
ကူညီပေးစေလိုပါတယ် [email protected]
ဟိုမေးဒီမေး စမ်းတဝါးဝါးနဲ့ Blogger.com ကနေပြီးတော့ ကျနော် Blogလေးတခု တည်ဆောက်
ထားပါတယ်၊ Blogger ကပေးတဲ့ Template ကိုပဲ သုံးရပါတယ်၊ Blogger ကပေးတဲ့ Template အားလုံးကလဲ စာမျက်နှာ
အပြည့်ပါတာ တခုမှမရှိဘူးဖြစ်နေ ပါတယ်၊ Blog ရဲ့ တဖက်တချက်စီမှာ လက်သုံးသစ်လောက်စီ ဟာနေတော့ ကြည့်မကောင်းဘူးဖြစ်နေပါတယ်၊ သူများBlog တွေကြည့်တော့ အားလုံးစာမျက်နှာ အပြည့်တွေ့ရပါတယ်၊ အဲဒါ ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာ လေးကူညီစေချင်ပါတယ်ဗျာ။
နောက်တခုက...Blogger ကပေးတဲ့ Template အားလုံးမှာ Menu Bar မပါဘူးဖြစ်နေပါတယ်၊ အဲဒီ Menu Bar နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ကိုညီနေမင်းရေးထားတာ ဖတ်ကြည့်တော့လဲ ခပ်ရှုပ်ရှုပ်ပါပဲဗျာ၊ ဒါ့ကြောင့် Menu Bar လုပ်ပုံ ထည့်ပုံလေးလဲ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြောပြပေးစေချင်ပါတယ်၊ စိတ်ရှည်လက်ရှည် မျှဝေပါဗျာ၊ သံသရာအတွက် ပညာပါရမီဖြစ်ပါတယ်။ မျှော်နေမယ်ဗျာ....
SALAI NGUN said…
ကို မောင်လှ၊ Windows7နဲ့ ဇော်ဂျီ Unicode ပြသနာတက်နေတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ရင် ကောင်းမလဲ ဆိုတာ အချိန်ရရင် ပညာမျှပေးပါလို့ တောင်းပန်ပါတယ်။
အောက်မှာ ပေးထားတဲ့ link က Zawgyi ကိုထည့်ကြည့်ပါ... အဲဒီဟာလေးက Windows732bit မှာရော 64 bit မှာပါ အလုပ်လုပ်ပါတယ်...
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ ပေးထားတဲ့လင့်က package ကိုဒေါင်းပြီး install လုပ်တာ ရသွားတယ်။
ကျွှန်တော် ကတော့ blog ကိုတော့ သိပ်မရေးဇြစ်ပါဘူး ဒါပေမယ့် အစ်ကိုတို့ တင်ထားတဲ့ အကြောင်းအရာလေးတွေ ဖတ်လို့ ကောင်းလို့ link လုပ်ထားတာပါ အဲဒါ အခု ကျွှန်တော် တို့ blog ဖွင့် ချင် ရင် ဘယ်လို ဖွင့် ရမလဲ ဆိုတာ၊ နောက် gmail မှာ တစ်ခြားသူတွေရဲ့ စာတွေမပွင့် ရင် ဘာလုပ် ရမလဲ ဆိုတာ လမ်းညွှန်ပေးပါ အုံးခဗျာ
taung zin said…
ဗျို.။ကျွန်တော် လည်း ကြုံဘူးတယ်ဗျို.
pdf file ဒေါင်းလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်